पत्याउनुहुन्छ ? एउटा मास्कको मूल्य ७ लाख पर्छ – Jagaran Nepal
पत्याउनुहुन्छ ? एउटा मास्कको मूल्य ७ लाख पर्छ
विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणबाट जोगिन मुखमा मास्क लगाउने विधिलाई प्रभावकारी विकल्प मानिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न विभिन्न मापदण्ड तोकिएका मास्कहरु बनाइएका छन् । विश्वस्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार बनाइएका मेडिकल तथा सर्जिकल मास्कहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोखिन केही हदसम्म प्रभावकारी पनि हुन्छन् ।
तर, केही ठाउँमा भने मास्कको प्रयोगलाई फेसनसँग जोड्न थालिएको छ । जस्तो कि भारतमा बिहेका बेला सुन तथा हिरा जडित मास्क प्रयोग गर्न थालिएको छ । गहना पसलेहरुले पनि ग्राहकको मागअनुसार सुन र हिरा जडित मास्कहरु बनाउन थालेका छन् । भारतको सुरतमा गहना पसल चलाउँदै आएका व्यापारी दीपक चौकसीले नेपाली रुपैयाँ करिब ७ लाख रुपैयाँसम्मको मास्क बनाएको बताएका छन् ।
उनले बनाएका मास्कको अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चा छ । विहेको सिजनलाई ध्यानमा राख्दै उनले बहुमूल्य धातु सुन, हिरा र चाँदी जडित मास्क बनाएका हुन् । गहना विक्रेता चौकसी विवाह गर्न लागेका जोडीहरुकै अर्डर अनुसार आफूले सुन र हिरा जडित मास्क तयार पारेको बताए । पछिल्लो समय उनले एक नवविवाहित जोडीका लागि शुद्ध अमेरिकन हिरा जडित मास्क बनाएको बताए । जसको मूल्य भारतमा ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पर्ने जनाइएको छ ।